အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးများ - Kantarawaddy Times
ကပ်ဘေးကြောင့် ပိတ်မိနေတဲ့ အသေးစားအမျိုးသမီး လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဘဝ
Kantarawaddy Times - October 28, 2020 0
ခွန်းကလိုင်းဖရီး အိမ်ထောင်စုစာရင်းထဲတော့ အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးအများစုရဲ့ အလုပ်အကိုင်နေရာမှာ မှီခိုအဖြစ်ပဲ ဖော်ပြထားတာတွေ မြင်တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ မိသားစု စားဝတ်နေရာအတွက် ရှာဖွေရုန်းကန်ရာမှာ အမျိုးသားတွေကြီးပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီးတွေလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ကြိုးပမ်းစွမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။
“ကျေးလက်နေ လူထုများနှင့် မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး”
Kantarawaddy Times - April 20, 2020 0
မော်ဦးမြာ လွိုင်ကော်မြို့ကနေ တစ်နာရီခွဲခန့်(ဆိုင်ကယ်ဖြင့်) မောင်းနှင်သွားရပြီး လွိုင်လင်လေးမြို့ နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဝမ်ငေါ့ကျေးရွာဟာ ယနေ့အချိန်ထိ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးနေဆဲပါ။ စာတတ်မြောက်သူ ဦးရေ အလွန်နည်းပါးတဲ့အတွက် အသိပညာ၊...
Kantarawaddy Times - January 24, 2020 0
အန်ထောနီ ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိစ္စရပ်တွေမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုရှိရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ သဘောတူညီချက်တွေရရှိဖို့လိုသလို ဥပဒေတွေလည်း အမြန်ဆုံး ပေါ်ပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်လို့ ကယန်းအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး(KyWO)မှ ကယန်းအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး(KyWO) ဗဟိုကော်မတီဝင် မူရင်းအားပိုင်က ပြောပါတယ်။ “အမျိုးသမီးရူ့ထောင့်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်...
Kantarawaddy Times - January 8, 2020 0
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ် ဖရူဆိုမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်းဒေသဘက်တွေမှာဆို ကယော၊ ကယား၊ ကော်ယော် မျိုးနွယ်စုတွေ အများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။ အဲဒီဒေသဘက်ကိုသွားဖို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်တွေအရင်က မကြာခဏကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဒဏ်တွေကြောင့်လည်း ယခုချိန်ထိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစစအရာရာနောက်ကျကျန်ခဲ့တဲ့ ဒေသဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်နီအမျိုးသမီး ၁၆ ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုပိတ်ပင်ခံရသည့်အပေါ် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက် အချို့
Kantarawaddy Times - December 5, 2019 0
ကမ္ဘာတဝန်းက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရေးနေ့(၁၆) ရက်တာ လှုပ်ရှားမှုကို နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ကယား(ကရင်နီ)ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်း အမျိုးသမီးအရေး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့...
Kantarawaddy Times - October 9, 2019 0
ဦးမြာ၊ မီမြာ ရေးသားသည်။ ကယားပြည်နယ် ဒီးမော့ဆိုမြို့တနန်းဥကွိုင် တွင်နေထိုင်သော ဒေါ်အန်တောညာသည် နံနက်စောစောတွင် အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ မနက်အစောပိုင်းတွင် ဝေါလ်ဗီရှင်မှထောက်ပံ့ပေးသည့် ဒေသဝက်မျိုးများကို အစာကျွေးခြင်း၊ သားသမီးများကျောင်းပို့ပေးရန် ပြင်ဆင်ခြင်းစသည့်ဖြင့် အလုပ်များနေလျက်ရှိသည်။
“ဘဝ အာမခံချက် ပျောက်ဆုံးနေသူများ”
Kantarawaddy Times - October 7, 2019 0
မော်ဦးမြာ ရေးသားသည်။ ဒုက္ခသည် ပြန်လည်နေရာချထားရေးမှာ ပါဝင်ပြီး နေရပ်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတာ လပိုင်းအတွင်းသာ ရှိသေးတဲ့ ဒေါ်ပိုးမယ်ကတော့ ဝါးထရံ ကာပြီး သွပ်မိုး မိုးထားတဲ့ ခြေတိုင်ရှည် အိမ်ငယ်လေးမှာ အမျိုးသားနဲ့အတူ မနက်စာအတွက်...
အမျိုးသမီးတွေနဲ့. သူတို့ရဲ့ သဘာဝအရက်ချက်လုပ်ငန်း
Kantarawaddy Times - October 4, 2019 0
ကရင်နီသူ ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ အိမ်ရှင်မတချို့တွေဟာ တောင်ယာ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်က အလုပ်တွေနည်းပါးချိန်မှာ အပိုဝင်ငွေအဖြစ်၊ သဘာဝအရက်ချက်ကြပါတယ်။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ကို တစ်အိုး၊ နှစ်အိုးချက်ပြီး အပိုဝင်ငွေရှာကြပါတယ်။ အပိုဝင်ငွေလို့ ပြောပေမယ့်လည်း ဆန်ကွဲဖိုး၊ ထင်းဖိုး၊ လုပ်အားခနဲ့တင် အရင်းပြန်ကျေပြီး ဝက်စာတစ်ခုလောက်ပဲ...
Style, Fashion, Outfits
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) အမျိုးသားတန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကို အာမခံပေးနိုင်တဲ့ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကို အင်လိုက်အားလိုက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသလိုနည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ဖန်တီးရေးသားရမယ့် ချိန်ကာလဖြစ်တယ်လို့ ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဌ ခူဦးရယ်က ပြောပါတယ်။
၂၀၂၂ ဇန်နဝါရီလ ၂၇ ရက် Kantarawaddy Times နေ့စဥ် Online ရေဒီယို အစီအစဥ်
https://soundcloud.com/kantarawaddy-times/kantarawaddy-times-674021859?si=55d4372312be4eda84b04e5eb8d907ab&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing ဒီနေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နန်ဝါရီလ ၂၇ ရက်နေ့ KT FM ရဲ့ ကြာသာပတေးနေ့ မနက်ပိုင်း ထုတ်လွင့်မယ့် အစီအစဉ်များမှာ ကရင်နီပြည်နယ်မှာ...